Muranka Jubbaland oo Soomaaliya dib ula haray mar kale – GEELLE MAG
Waxaa maalintii shalay aheyd magaalada Kismaayo ee xaruta kumeel gaarka ah ee Maamul Goboleedka Jubbaland ka qabsoontay Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Kadib markii ay dhowr mar dib u dhacyo ku yimaadeen Munaasabadan, balse shalay waxaa suuragashay qabsoomidda Xafladan.
Munaasabaddan Caleema saarka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland waxaa ka qeyb galay Madaxdii hore ee dalka kasoo arimisay, Xildhibaan ka tirsan labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, Wasiiro hore, Siyaasiyiin, Madax ka socotay dowladda Kenya iyo qaar ka mid ah bulshada reer Jubbaland.
Kadib doorashadii ka dhacday Magaalada Kismaayo ee Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland loogu doortay Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa waxaa ka dhalatay muran iyo is qab qabsi dhowr ah, sababtayna in Kismaayo ay yeelato seddax Madaxweyne oo kala ah Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), C/rashiid Maxamed Xidig iyo C/naasir Seeraar.
Sidoo kale Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gebi ahaanba diiday ama ka hortimid natiijadii kasoo baxday doorashadii ka dhacday Kismaayo bishii August ee sanadkan 2019-ka ee lagu doortay Axmed Madoobe, iyadoo mar marsiyo ka dhiganeysa in aan loo marin hanaan wanaagsan.
Khilaafkii ka dhashay doorashadii ka dhacday Kismaayo ee lagu doortay Axmed Madoobe waxa ay sababtay in xayiraado la saaro Garoonka Diyaaradaha ah ee Magaalada Kismaayo, kaasoo ay ku tiirsanaayeen dad badan oo shacab ah, kuwaasoo dhib badan u maray khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ee kala ah dhinaca Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhinaca Maamul Goboleedka Jubbaland.
Markii loo eego danaha siyaasadeed ee labada dhinac ay ka leeyihiin dhinaca maamulka Jubbalandna, ma jirin labada dhinacba dhinac u tura dadka shacabka ah ee ku dhaqan maamulka Jubbaland, kaliya dhinac walbo waxaa u muuqday arimahiisa siyaasadeed ama danahiisa gaarka ah ee siyaasadeed, horay ayaa waxaan u maqli jiray “nin ay meel u cadahay meeli ka madow”.
Xayiradii ay muddo todobaadyo ah saartay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Garoonka Kismaayo, waxa ay dadka intiisa badan u fasirteen in ay dowldda diidan tahay ka qeyb galka Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Dowladda Goboleedka Jubbaland.
Balse markii Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ku xayirtay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku wajahnaa magaalada Kismaayo, si uu uga qeyb galo Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland.
Kadib xanibaadii ay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ku sameysay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaa isla markiiba dhalatay xiisad horleh oo siyaasadeed.
Balse khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamul Goboleedka Jubbaland waxa ay noqotay “Faanoole fara kama qodna”, waxaana maalinba maalinta kasii dambeysa sii kala fogaanaya farqiga u dhaxeeya Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedk Jubbaland.
5-tii bishan Oktoobar Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay soo saartay qoraal tobon bog ka koobnaa oo si layaab leh u qodobeesnaa, kaas oo ay Wasaaraddu ku faah faahisay qaabka la doonayo in lagu qabto doorasho kale oo Jubbaland ka dhacda bilow illaa dhammaad.
Hase yeeshee, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa qoraalka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin.
Hadda waxa ay u eg tahay in dowladda ay u seeta dheereyneyso Jubbaland iyo siyaasiyiinta aan ku fikirka aheyn, kuwaasi oo hadda ku doobin dhabanaya qalcadaha xeebta gulaalaya ee Kismaayo.
Sidoo kale dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay soo saartay amar kale oo ay xayiraad ku saareyso diyaarad kasta oo ka timaada dalka Kenya.
Balse dowladda Kenya dhaq jalaq uma aynan siinin amarka ay dowladda Soomaaliya soo saartay, waxaana isla maanta kasoo degtay Magaalada Kismaayo diyaarad sidda wafdi ka socda dowladda Kenya, kuwaas oo ka qeyb galay Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Maamul Goboleedka kaliya ee Madaxweynihiisu tagay Kismaayo waa Puntland, halka ragga kale ee miisaanka culus ay u badan yihiin madaxdii hore ee dalka soo martay, kuwaas oo hadda u socod gaatamaya kursiga Villa Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, kadib bilaabashadii Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, waxaa madasha khudbado ka jeediyay mas’uuliyiintii ku sugnaa goobta ay xafladda ka dhaceysay.
Madaxdii ka qeybgashay xafladii Caleema saarka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland waxa ay halkaasi ka jeediyeen khudbado dhinacyo badan taabanayo, iyagoo intooda badan eedeyn usoo jeedinayey madaxda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, dadkii khudbadaha madashaasi ka jeediyay waxaa ka mid ahaa Senator C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole, wuxuuna yiri:
“Ficilka maanta socda waa burburin, marka waxaana ugu baaqaynaa Madaxweynaha dib u heshisiiniin”.
Sidoo kale waxaa khudbad qiiro leh madashaasi ka jeediyay wasiirkii hore Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle, wuxuuna yiri:
“Soomaaliyay waad xasuusan doontaane dowladeena Wadahadal ma taqaano, waxay taqaanaa in la daba kaco ama in ay dadka ka adkaato, dadka Soomaaliyeed dabcigooduna waa in la wadahadlo oo la isku tanaasulo oo la isku dulqaato, marka waxaa haboon dadka Soomaaliyeed waxay rabaan in dowladdu ay la rabto”.
Sidoo kale waxaa halkaasi khudbad ka jeediyay Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane C/kariin Xuseen Guuleed, Waxa uu sheegay in loo diyaar garoobo in Wada tashi la geliyo go’aanka siyaasadeed ee Dalka, sidoo kalena laga wada tashto sidii lagu nooleyn lahaa arrimaha masiiriga ah ee dalka.
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame waxa uu ka mid ahaa mas’uuliyiintii khudbadaha ka jeedisay munaasabaddaas, waxa uu Madaxda dalka uga digay Muddo Kororsi iyo in doorashada soo socoto aysan noqon mid xor iyo xalaal ah.
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka mid ahaa madaxdii khudbadaha ka jeedisay Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan Kismaayo ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya aan loogu dulqaadan doonin in doorashada Qaranka ee soo socota ay ka dhigto sidii doorashadii ka dhacday Baydhabo oo kale.
Madaxweynihii hore ee Dowladii kumeel gaarka aheyd ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna khudbad ka jeediyay munaasabadda xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland, waxa uuna quus ka muujiyay xaaladda cakiran ee dalku sii galayo, wuxuu yiri “waxaa ilaahey mahadii ah laba mas’uul oo laba maamul goboleed madax u ah in ay nala joogaan maanta, labadiina madaxweyne, dadka aad ka timaadeen iyo maamulkiina haday wax halaabaan dambiga idinka ayaan idin heysanaa, sababtoo ah anaga waan kasoo quusanay dowladda dhexe, quus ayaan ka nahay, waan ka nimid, rajo xitaa noo gama jirto, mas’uuliyadda qaata ummadda Soomaaliyeed isugu yeera, anagana diyaar ayaan nahay”.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa gunaanudka khudbada qaatay, waxa uuna ka hadlay in laga shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu xusay in Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ku tixgalinayaan waajibaadkooda dastuuriga ah, laakiin dhanka dowladda aysan iyaga ku tixgalin Hanaankii Awoodda maamul goboleedka
Sidoo kale Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) waxa uu ugu baaqay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in wax walbo Wadahadal iyo wada xaajood uu ku dhameeyo, maadaama uu yahay Madaxweynaha Qaranka.
Ugu dambeyn, Magaalada Kismaayo waxa ay martigelineysaa muran iyo khilaaf siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadii ka dhacday Magaaladaasi. Maadaama murankan siyaasadeed uu daba dheeraaday, ma laga yaabaa in laba dhinac midkood uu tanaazul samaayo, si shacabka ay u helaan kalsooni nololeed oo ay ku naaloodaan.
Kulamo xasaasi ah oo ka socda Magaalada Kismaayo